४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०८:२२ PM
कलिउडमा नातावाद !!
४ असार २०७७, बिहीबार ०८:५९ मा प्रकाशित
२०७७ असार ३ बिहीबार,काठमाडौं । डिप्रेसनका कारण बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि फिल्म उद्योगमा ‘नेपोटिज्म’ को बहस चर्किएको छ। बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले बलिउडमा व्याप्त नातावादका कारण सुशान्तले आत्महत्याको बाटो रोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली फिल्म बजारमा पनि यो विषयले चर्को बहसको रूप लिएको छ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा मौलाएको ‘नेपोटिज्म’ र ‘ग्रुपिज्म’ का कारण मेहनत गरेर अगाडि बढ्न चाहने र अभिनयमा अब्बल कलाकार डिप्रेसनको सिकार भएको केहीको तर्क छ। फेसबुकमा भिडियो पोस्ट् गर्दै अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले नातावादको कुरा गर्न बलिउडसम्म पुग्नै नपर्ने बताएकी छन्।
नम्रताको अभिव्यक्ति आउन नपाउँदै अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटीको कडा स्टाटस आएको छ। उनले लेखेकी छन्, ‘‘नेपोटिज्म’ सबैतिर हुन्छ, फिल्म उद्योगमा मात्र होइन। फरक यत्ति हो कि फिल्म इन्डस्ट्री छर्लंग छ, सत्य बोल्ने आँट कमैको छ। किनकि यस्ता अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा करिअरमा असर पर्न सक्छ, कामको अभाव हुन सक्छ ।’
वर्षाले यही प्रसंग जोड्दै विभिन्न विषय उठान गरेकी छन्। ग्रुपिज्म, लभ अफेयर, युट्युबर र कलाकारको सम्बन्धलगायतका विषयले पनि उद्योगलाई असर परेको उनको विश्लेषण छ।
यस विषयमा निर्देशक दीपेन्द्र लामा अलि फरक धारणा राख्छन्, ‘नेपाली फिल्म खेलेर करोडौं पारिश्रमिक पाउने पनि होइन। फिल्म खेलेर गाडीबंगला जोहो गर्ने नेपाली कलाकार बढीमा तीन चारजना होलान्। बाँकीलाई खर्च चलाउनै धौधौ छ। वास्तवमा यहाँ कुनै इज्म नै छैन।’
निर्देशक कुमार भट्टराईले आफ्ना सन्तानलाई आफू हिँडेको बाटोमा ल्याउनु गलत नभएको र त्यसलाई अनर्थ लिन नमिल्ने बताए। ‘विनोद चौधरीको छोरा चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष बन्छ, त्यो ‘विरासत’ हो। भुवन केसीको छोरा अनमोल केसी हिरो नै बन्छ, त्यो ‘नेपोटिज्म’ हो। त्यो सिनेमा रंगमञ्चमा यता नि छ। बुझ नपचाम्’, भट्टराईले भने।
तर, यस विषयमा अभिनेता सुशील श्रेष्ठको भिन्न मत छ। उनी नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नातावाद नरहेको बताउँछन्। भन्छन् ‘म कुनै फिल्मी परिवारबाट आएको होइन र मलाई फिल्मी परिवारबाट आउने कलाकारसँग केही ईष्र्या पनि छैन। नेपाली फिल्म क्षेत्र भर्खरै त पाइला टेक्दै छ, हुर्किंदै छ अघि बढ्दै छ। ‘नेपोटिज्म’ कताबाट आयो अहिले नै ? फिल्मी परिवारबाट आएको कलाकार पनि कति चलेका छन् र कति चलेका छैनन्।’